Indlu yelizwe kwindawo ebukekayo - I-Airbnb
Indlu yelizwe kwindawo ebukekayo
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguFrank Asger
UFrank Asger yi-Superhost
Indlu ikwilali encinci, iVindebæk, engekude ukusuka eFanefjord Skov, apho i-beech ibonakala kwi-blue wave, kwaye kukho nje ikhilomitha encinci ukuya kwi-Vindebæk Beach engaphazamisekiyo, ebekwe kanye emlonyeni weGrønsund. uLwandle lweBaltic. Bona amaxabiso kwikhalenda!
Ukuba undwendwe alufuni ukwenza ukucoca kokugqibela ngokwabo, oku kungathengwa nge-400 DKK.
IVilla Biviola ikwindawo entle kwintshona yeMøn.
Kukho iibhedi ezi-6 (3 + 2 + 1)
Indlu ikwilali encinci, iVindebæk, engekude ukusuka eFanefjord Skov, apho i-beech ibonakala kwi-blue wave, kwaye kukho nje ikhilomitha encinci ukuya kwi-Vindebæk Beach engaphazamisekiyo, ebekwe kanye emlonyeni weGrønsund. uLwandle lweBaltic.
Ukusuka kwindlu kukho umbono wamanzi kunye ne-Falster ngasemva.
4.88 · Izimvo eziyi-294
Le lali inoxolo kakhulu kwaye inobuhlobo nabantwana. Omnye wabamelwane unefama encinci enevenkile yasefama, apho unokuthenga khona i-veal emnandi kakhulu, kwaye kukho nethuba lokufuya amathole. Ehlotyeni sinefama encinci yobisi ekufutshane, apho iitshizi zasekhaya ziveliswa kwaye ungandwendwela ngeempelaveki.
Thina ngokwethu sivelisa ubusi kwiiapile zethu, yaye ekupheleni kwehlobo sivuna ama-apile ethu. Ubusi bunokuthengwa kwaye kufuneka bungcamlwe.
Kwilali eselumelwaneni yiHårbøllehuset, esebenza njengekhefi kunye nendlu yenkcubeko. (1 km)
Maninzi ngenene amathuba amahle okuloba ecaleni konxweme eMøn, kwaye amanye awona angcono aphantse akwisango lakho.
Umbuki zindwendwe ngu- Frank Asger
Sihlala kwindlu esecaleni, kwaye ukuba sisekhaya xa usiza, ngokuqinisekileyo siya kukwamkela kwaye sikubonise. Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ngemibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Askeby